Mamiriro ekunze eIndia: Ndeipi nguva yakanakisa yegore yekushanyira India? | Absolut Kufamba
Mamiriro ekunze eIndia: Ndeipi nguva yakanakisa yegore yekushanyira India?
La India, iri mumoyo weAsia inofarira a akasiyana mamiriro ekunze. Chinonyanya kuzivikanwa chiitiko chinodaidzwa monsoon, iyo inogara mukati mese mwaka wezhizha. Hunhu hwayo hukuru imvura yakareba, ine mvura zhinji. Iyo inofamba nyika kubva kumaodzanyemba kuenda kuchamhembe ichisimudza mwando mwero. Iyo monsoon inounza mafashama nematambudziko semhedzisiro mumigwagwa yemigwagwa yenyika, iyo pachayo inosiya zvakanyanya kudiwa zvisinei nemamiriro ekunze panguva iyoyo.
Izvo chete kubva munaGunyana apo mwando unodzikira musimba. Mhenderekedzo yekumabvazuva kwenyika ndiyo nzvimbo yekupedzisira yekunzwa mhedzisiro yayo, asi yatove muna Zvita mamiriro ekunze eIndia anodzikama zvachose, achiva anotonhorera uye akasimba. Nguva yechando kuchamhembe inotonhora, mhedzisiro yekuve pedyo neHimalaya, uku kumaodzanyemba kuchiramba kuchipisa. Yechirimo, panguva yekutanga chetatu yegore, mamiriro ekunze epakati penyika akadzikama. Tembiricha munzvimbo iyoyo inokwira pakati paKurume naMay nematembiricha akatosvika pamadhigirii makumi mana neshanu, kupisa kunodzikira nekutanga kwemonesi, kuchipedzisa iyo yakambotsanangurwa kutenderera.
Nguva yakanakisa yegore yekushanyira India iri pakati paMbudzi naKurume, kunyanya munguva yekuoma.. Maguta ekuchamhembe akadai seNew Delhi kana Agra vanonakidzwa nemamiriro ekunze akanaka, sezvinoita pakati penyika. Maodzanyemba, kunyangwe mononesi inotanga pakati pegore, inowanzo kupisa zvachose. Kuti uende kuHimalaya uye uone makomo marefu pasirese zvakanak kugadzirira rwendo muna Nyamavhuvhu kana Gunyana, apo mononiyoni isati yasvika munzvimbo iyoyo yenyika.
Monsoon inonongedza nzira dzevashanyi veIndia. Kunyangwe mune dzidziso pane mwaka, haugone kusiyaniswa zvakajeka mukati megore. Jogirafi yayo ndiyo kiyi yekunzwisisa iyi poto inonyungudika, kubva kumakomo akafukidzwa nesinou yeHimalaya, ayo anonyoresa kudziya kwakadzika kwazvo munyika, kuzviwi zveparadhiso zveLaccadives, kuwedzera mukuwedzera kwayo kukuru kweanopfuura mamirioni matatu mativi makiromita. Iyo Indian Ocean zvakare chinhu chinokonzeresa kusimudzira kwemamiriro ekunze kwenyika. Dzimwe nguva, madutu anopisa anotangira mugungwa anounza semhedzisiro mvura kumahombekombe, kunyanya kumaodzanyemba. Chaizvoizvo MuIndia mwaka wemwaka wechirimo, zhizha, monsoon uripo, unotsiva matsutso, uye nguva yechando.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Mamiriro ekunze eIndia: Ndeipi nguva yakanakisa yegore yekushanyira India?
Raclette, yakajairika Swiss dhishi
Tricolor porcelain kubva kuTang dynasty